Soo-saareyaasha budada Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Raw Liothyronine (T3) - Warshadda
Budada macdanta ah ee Root Liotyronine Sodium (T3) (55-06-1)
Liotyronine waa nooc caleenta ah ee hormoonka thyroid (T3) oo loo isticmaalo daawaynta hypothyroidism iyo coma. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sidii istaraatajiyad lagu xoojinayo daawaynta Cudurka Murugada leh ee weyn (Depressive Depression) marka lagu daro antidepressants.
Qalabka Root Liotyronine Sodium (T3) (55-06-1) video
Budada macdanta ah (3-55-06)
Kalluunka Liotyronine Sodium (T3) budo waa macmacaan mid ka mid ah labadii hormoon ee ay sameeyeen qanjirka thyroid, triiodotyronin. Waxaa loo adeegsadaa daaweynta shakhsiyaadka qaba hypothyroid (ha keenin hoormoonka tayroodhka ku filan). Hormoodka qanjirka 'thyroid' wuxuu kordhiyaa dheef-shiid kiimikaad ee jirka oo dhan. Dumarka, ilmaha dhasha ah iyo ilmaha, hormoonada tayroodh waxay kor u qaadaan koritaanka iyo horumarinta unugyada. Dadka qaangaarka ah, hoormoonka tayroodhka ayaa ka caawiya inuu sii wado shaqada maskaxda, isticmaalka cuntada jirka, iyo heerkulka jirka. Waxa kale oo loo isticmaalaa in lagu daaweeyo noocyada kale ee dhibaatooyinka tayroodh (sida noocyada kala duwan ee goiters, kansarka tayroodh). Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo noocyo kala duwan oo cudurka qaaxada ah. FDA waxay ogolaatay liothyronin bishii May 1956.
Dufanka Liotyronine Sodium (T3) budada (55-06-1) Smamnuucista
Product Name Biyaha budada ah ee Root Liotyronine Sodium (T3)
Magaca Kiimikada 5-Triiodo-L-thyronine cusbo sodium, cusbo sodium (1: 1), 5-diiodo- L-Tyrosine
Fasalka Daroogada Cytochrome P450 inhibitor, Ca antagonist, suuxdinta (maxaliga)
Molecular Wsideed 672.96
barafku Psaliid 205 ° C (dec.) (Iftiin)
Biological Life-Life ku saabsan maalmaha 2-1 / 2
Color White to Brale Brown
SOlubility 4 M NH4OH ee methanol: 125 g / 5mL, cad, jaalle ah
Application Waxaa loo adeegsadaa in lagu daaweeyo qanjirro aan firfircoonayn (hypothyroidism)
Waa maxay budada Root Liotyronine Sodium (T3) (55-06-1)?
Kalluunka Liotyronine Sodium (T3) budo waa macmacaan mid ka mid ah labadii hormoon ee ay sameeyeen qanjirka thyroid, triiodotyronin. Waxaa loo adeegsadaa daaweynta shakhsiyaadka qaba hypothyroid (ha keenin hoormoonka tayroodhka ku filan). Hormoodka qanjirka 'thyroid' wuxuu sii kordhiyaa dheef-shiid kiimikaad ee jirka oo dhan. Dumarka, ilmaha dhasha ah iyo ilmaha, hormoonada tayroodh waxay kor u qaadaan koritaanka iyo horumarinta unugyada. Dadka qaangaarka ah, hoormoonka tayroodhka ayaa ka caawiya inuu sii wado shaqada maskaxda, isticmaalka cuntada jirka, iyo heerkulka jirka. Waxa kale oo loo isticmaalaa in lagu daaweeyo noocyada kale ee dhibaatooyinka tayroodh (sida noocyada kala duwan ee goiters, kansarka tayroodh). Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo noocyada cudurada thyroid qaarkood.
Dufanka Liotyronine Sodium (T3) budada (55-06-1)
Miisaanka lagaga talinayo Hypothyroidism
Qiyaasta bilowga ah ee lagu talinayo waa 25 mcg hadal ahaan maalintii mar. Kordhiya qiyaasta xNUMX mcg maalin kasta 25 ama 1 kasta, haddii loo baahdo. Qiyaasta dayactirka caadiga ah waa 2 mcg 25 mcg mar maalintii.
Bukaanka waayeelka ah ama bukaanka qaba cudurka wadnaha ee hoosta ka dhaca, waxay bilaabaan mcg CYTOMEL 5 marwalba maalin kaddibna waxay kordhisaa xaddiga mcg 5 ee muddooyinka lagu taliyey.
Serum TSH ma aha qiyaas la isku halleyn karo oo ah qiyaasta CYTOMEL ee ku filan ee bukaanada qaba cudurka hypothyroidism secondary ama hyperyroidism oo aan loo isticmaalin inay daaweeyaan daaweynta. Isticmaal heerka heerka serum T3 si loo kormeero macquulnimada daaweynta bukaankan.
Qiyaasta bilowga ah ee lagu taliyey waa 5 mcg maalinle ah, iyada oo 5 mcg sii kordhiso 3 kasta ilaa maalmaha 4 ilaa jawaabta la doonayo la gaaro. Dhallaanka dhowr bilood jira waxay ubaahan karaan xNUMX mcg maalin kasta si loo dayactiro. 20 da'da sanadka, 1 mcg mar maalin ayaa loo baahan karaa. Xagga sare ee 50 da'da, qiyaasta qaangaarka ee qaangaarka ah ayaa lagama maarmaan u ah [fiiri Isticmaalka Dadka Naafada ah (3)].
Carruurta dhawaan dhalatay (0 ilaa bilaha 3) ee Halista Khatarta Wadnaha (Heart Failure):
Tixgeli qiyaasta bilawga ah ee ilmaha yar ee khatarta ah ee ku dhaca wadnaha. Kordhinta qiyaasta sida loogu baahdo iyadoo lagu saleynayo jawaabta daaweynta iyo sheybaarada.
Bukaanka Caafimaadka ee Bukaanka ee Khatarta Hibada:
Si loo yareeyo khatarta caabuqsanaanta bukaanka carruurta, billow hal qiyaasta buuxda ee lagu taliyo ee la soo jeediyey, kordhi toddobaadkiiba hal mar qadarka bedelka ah ee lagu taliyey ilaa inta laga gaari karo qiyaasta bedelka lagu taliyo.
Xanuunka horay loo yaqaan 'hypothyroidism': Qiyaasta hoormoonka hormoonka qaaxada ayaa kordhi kara inta lagu jiro uurka. Caabuqa serum TSH iyo bilaash ah-T4 sida ugu dhakhsaha badan uurka oo la xaqiijiyo, ugu yaraan, marxaladda saddexda bilood ee uurka. Bukaannada qaba cudurka hypothyroidism, waxay ku ilaalinayaan serum TSH inay ku jiraan qaybaha tixraaca saddexda ah. Bukaannada qaba serum TSH oo ka sarreeya heerka caadiga ah ee saddexda bilood ee caadiga ah, kordhiya qiyaasta hoormoonka thyroid iyo qiyaasta todobaad kasta 4 illaa iyo inta laga gaarayo qiyaasta xasaasiga ah iyo serum TSH waa dhexdhexaad gaar ah. Iska yaree qiyaasta hoormoonka hormoonada ee heerarka uur-ku-jirka kahor intaan la gudbin kadibna cabirin heerarka serum TSH 4 illaa 8 isbuuc kadib si loo hubiyo in qiyaasta hormoonada hormoonka ah ay habboon tahay.
Miisaanka loogu talagalay TSH Toosinta Kansarka Cudurka Qanjidhka Wanaagsan ee kala-duwan
Qiyaasta CYTOMEL waa in ay bartilmaameedsadaa heerka darajooyinka TSH ee gudaha daaweynta. Tani waxay u baahan kartaa qiyaaso sarreeya, iyadoo ku xiran heerka bartilmaameedka loogu talagalay calaamadaynta TSH.
Miisaanka lagu taliyey ee Baaritaanka Daawada Qanjidhka Dufanka
Qiyaasta la soo jeediyey waa 75 mcg xNUMX mcg maalin kasta maalmaha 100, iyada oo kor u kicinta shucaaca shucaaca leh ee la go'aamiyo ka hor iyo ka dib maamulka 7 ee maamulka CYTOMEL. Haddii hawlaha tayroodhku caadi yihiin, kor u qaadista raadiyuhu wuxuu hoos u dhigi doonaa daaweyn ka dib. 7% ama xakameyn weyn ee kor u qaadista waxay muujineysaa xajmiga thyroid-pituitary caadiga ah.
Ka beddelashada Levothyroxine ilaa CYTOMEL
CYTOMEL waxay leedahay ficil degdeg ah oo waxqabasho leh iyo saameynaha hadhaaga ah ee diyaarinta kale ee tayroodhka ayaa laga yaabaa inay sii socoto dhowrka toddobaad ee hore ka dib bilaabista daaweynta CYTOMEL. Markaad bukaanka u beddesho CYTOMEL, joojiso daaweynta levothyroxine oo ku bilaw CYTOMEL qiyaas yar. Si tartiib ah u kordhi qiyaasta CYTOMEL sida ku saabsan jawaabta bukaanka.
Kormeerka Qiimeenta iyo Triiodotyronine (T3) Heerarka
Qiimee ku filnaanshaha daaweynta qiyaasta qiimeynta ee shaybaarka iyo qiimeynta daaweynta. Caddeynta joogtada ah ee kiliinikada iyo shaybaarada ee hypothyroidism inkastoo muuqaal cuna qabasho ah oo ku filan CYTOMEL waxay noqon kartaa caddayn ku filan nacnacnaanta, u hoggaansanaan la'aanta, isdhexgalka daroogada, ama isugeynta arrimahaas.
Bukaanno qaangaar ah oo qaba cudurka asaasiga ah ee hypothyroidism, waxay kormeeraan serum Q si joogto ah ka dib markii la bilaabay daweynta ama isbedel kasta. Si loo hubiyo jawaabta degdegga ah ee daaweynta ka hor intaan qadku helin fursad ay kaga jawaabaan ama haddii xaaladdaada bukaanku u baahan tahay in la qiimeeyo ka hor inta aan la gaarin, qiyaasta guud ee T3 waxay noqon kartaa mid ku habboon. Bukaannada ku jira qiyaasta xasiloon oo habboon, beddelaan jawaabta daaweynta iyo baaritaanka biochemical kasta 6 ilaa bilaha 12 iyo mar kasta oo isbeddel ku yimaado xaaladda bukaan socodka.
Bukaanka cudurrada carruurta ee qaba hypothyroidism, waxay qiimeeyaan ku filnaanshaha daaweynta beddelka adigoo qiyaasaya heerarka serum TSH iyo T3. Wixii bukaanno carruurta ah saddex sano iyo ka weyn, kormeerka lagu taliyey waa 3 kasta bilaha 12 kasta oo ka dambeeya, ka dib dejinta qiyaasta ilaa koritaanka iyo baaluqnimada. Ku-hoggaansanaanta liidata ama qiimaha aan caadiga ahayn ayaa laga yaabaa in loo baahdo ilaalin joogto ah. Samee baaritaanka shaybaarka joogtada ah, oo ay ku jirto qiimeynta horumarinta, koritaanka maskaxda iyo korniinka, iyo korriinka lafaha, marka loo eego si joogto ah.
Inkasta oo ujeedada guud ee daaweynta ay tahay in ay caadi u noqoto heerarka Qaaxada TSH, Qalitaankani caadi ahaan ma ahan mid caadi u ah bukaanjiifka sababtoo ah kudhaca utero hypothyroidism taas oo keenta in dib loo soo celiyo jawaab celinta qanjirada 'thyroid'. Qalitaanka 'serum TSH' si loo yareeyo hoosta 20 IU halkii litir ka dib markii la bilaabay daaweynta CYTOMEL ayaa tilmaameysa in ilmuhu aanu helaynin daaweyn ku filan. Qiimee u hoggaansamida, qiyaasta dawada la qaato, iyo qaabka maamulka ka hor inta kordhinta qiyaasta CYTOMEL.
Hypothyroidism Secondary iyo Tertiary Hypothyroidism
La soco heerarka serum T3 iyo sii joogga inta caadiga ah.
Macdanta Root Liotyronine Sodium (T3) budada (55-06-1)
Liotyronine waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurka thyroid ee aan firfircooneyn (hypothyroidism). Waxay badaleysaa ama bixisaa hoormoon tayroodh badan, oo caadi ahaan lagu sameeyo qanjirka thyroid. Liotyronin waa nooc ka sameysan qaabka hormoonka thyroid. Heerarka hoormoonka tayroodhka ee hooseeya waxay dabiici karaan ama marka qanjirka thyroid ku dhaawacmaa shucaaca / daawooyinka ama laga saaro qalitaanka. Qaadashada hoormoon tayo leh oo kugu filan ayaa kaa caawinaysa inaad caafimaad qabto. Carruurta, haysashada hoormoonka tayroodhka ku filan waxay ka caawisaa inay koraan oo ay si caadi ah u bartaan.
Daawadani waxa kale oo loo isticmaalaa in lagu daaweeyo noocyada kale ee dhibaatooyinka tayroodh (sida noocyo gaar ah ee goiters, kansarka tayroodh). Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo noocyada cudurada thyroid qaarkood.
Waxaad ka soo iibsataa Liothyronine Sodium (T3) budada Buyaas.com